Maku aragtay Xishood Nuucaan ah -Haka Harin Weligaa | Gaaloos.com
Home » galmada » Maku aragtay Xishood Nuucaan ah -Haka Harin Weligaa
Maku aragtay Xishood Nuucaan ah -Haka Harin Weligaa
Hadii aad dareento in aad u baahan tahay in aad kulan ciyaareedka la qaadato lamaantaada ninyahoow horay ha ugula deg degin in aan ka dalbato in aad ciyaarta bilaawdaan , waxaa suura gal ah in lamaantaada aysan nafsiyan diyaar u aheyn .
Hadaba doorkaada ayaa la joogaa ninyahoow in aad xariif iska dhigto talabaadaan samee waa hubaal baashaalka idin dhex mari doona marar badan waad u macasan doontaan.
Baashaalka labada bari dhexdooda la mid ma aha galmada dabada riix akhriso
Umuuji in aad dooneyso in aad rabto in aad soo qubeysto iyadana aad ka dooneyso in ay saabuunka kugu daliigto , markaa ka dib u sii jiid dhanka barkada qubeyska halkaasna haka bilaawdo musasalka yar ee romantic-ka kaasi oo ka bilaabanaya kaftan , qosol iyo in biyaha la isku firdhiyo illaa ay dharka iska bixiso ayna kula qabeysato waxaana halkaasi ka bilaabanaya isugu daliigidda sabauunka .
Waxaa jira dad badan oo aan ka fekerin qubeyska ka hor galmada taana waa qalad, kaliya waxa ay u haystaan in la isaga baahan yahay uun ka dib ciyaarta sariirta .
Ka dib qubeys uu ku dheehnaa kaftan iyo qosol idinna xasuusiyay maalmihiina koowaad ee guurkiina , isku day markaan in aad kula dhex ciyaarto gudaha biyaha adiga oo ku ciyaaraya timaheeda , xabadkeeda , dhabarkeeda baashaalkaasna wad ilaa aad ka aragto in shumici indhaheeda uu sii laciifayo , hana joojin baashlaakaas ilaa ay ka gaarto in niyadeeda ka tiraahdo alla mar lee muu ka codsado in uu weerarka soo qaado .
Marka aad jirka iska qalijisaan, u muuji oo xabad xabad u jiifo una sheeg in aad u baahan tahay xooga yar oo riix riixitaan ah , hana iloobin in aad adna u kareemiso.
Intaas ka dib isku day in aad ka soo xabad giliso dhanka dhabarka , haweenka aad ayay u jecel yihiin in laga soo xabad giliyo gadaal , markaas hadal yaro oo xam xam ah ugu sheeg dhagta ilaa ay la xanta xantooda isla markaana markaas waxaad fursad u heleysaa in aad biradeeda ku ciyaarto salaaxdo .
Saaxiibow ha u qaadan in aad intaas ku kicisay , marka halkaas aad mareyso iyada weydii qaabka ay u rabto in aad u baashaaliso , u oglaaw in iyada doorato habka ay u rabto baashaalka ilaa ay gaarto heerka kacsiga lala dhareero .
Hablaha qaarkood waxa ay aad u jecel yihiin in laga xanta xanteeyo dhanka xubintooda ee haka laba labeyn in aad ka dhunkato kuna ciyaartid , lagama yaabo in ay ku ku iloowdo illaa geerideeda waa ay ku xasuusnaaneysaa.
Saaxiibow aan xariifka aheyn marka ay dhamaato ciyaarta horay jiif hagu cararin ee u mahad celi lamaantaada oo xoogaa sii baashaali markaas ayayba haweenka raaxo ka mac tii hore helayaan hana u qaadan in ay la mid tahay weel dharagta la isaga bixiyo.
Title: Maku aragtay Xishood Nuucaan ah -Haka Harin Weligaa
Posted by Unknown, Published at 4:30 AM and have 0 comments